नेपाललाई छैठौं सफलता, बिस्फोटक ब्याट्सम्यान सुरी आउट ! [LIVE] – Everest Dainik – News from Nepal
नेपाललाई छैठौं सफलता, बिस्फोटक ब्याट्सम्यान सुरी आउट ! [LIVE]
अहिलेसम्म नेपालले युएईको छैठौं विकेट लिएको छ । युएईको छैठौ विकेटका रुपमा चिराग सुरी आउट भएका छन् । उनलाई दिपेन्द्र सिंह ऐरीले रन आउट गरे । चिराग ६५ रन बनाएर पवेलिउन फर्किएका हुन् ।
यस्तै, नेपालका लागि सोमपाल कामीले एक विकेट लिएका छन् । उनले उनले मुहम्मद उस्मानलाई १४ बलमा १३ रन बनाएको अवस्थामा आउट गरेका हुन् । यस्तै नेपालका लागि बसन्त रेग्मी र सन्दीप लामिछानेले दुई दुई विकेट लिएका छन् । बसन्तले पहिलो र तेस्रो तथा सन्दीपले दोस्रो र चौथो विकेट लिएका हुन् ।
ट्याग्स: Chirag Suri, Dipendra Aire, nepal vs uae, nepali cricket team